FIKAROHANA ZAVATRA VERY AMIN’NY ODY GASY : Mampisavorovoro fiarahamonina ao Toamasina ny GPS gasy
Ny 4 septambra, misy olona milaza ho very moto no naka ireo mpanao « gps gasy ». Hazo entina mandehandeha lazaina fa mahita zavatra very. Niafara tao amin’ny tokotany iray tao Ankirihiry-Avaratra Toamasina parisela 11/58 ireo mpitondra ilay gps gasy. Natao ny fisavana.Niala maina fa tsy hita tao ilay moto. 18 octobre 2019
Ny 14 septambra, mbola niverina indray sady niaraka tamina zandary. Nolazaina indray fa ao amin’io tanàna io no milevina ny fitoeram-bola na « coffre » misy vola izay nisy nangalatra. Natao ny fisavana niala maina ihany koa. Nisy mihitsy moa ny fangadiana tanteraka ny tokotany fa niala maina hatrany. Ny alatsinainy lasa teo, tonga tao amin’ilay tanàna indray ny mpitandro filaminana avy tany Antananarivo nisava ny trano fa mbola niala maina hatrany.
Ho an’ireto fianakaviana ireto, dia fanakorontanana sy fandrebirebena saim-bahoaka io resaka “gps gasy” io, ka tokony hojeren’ny fanjakana akaiky. Ahiana hitarika fitsaram-bahoaka izy io sady lasa fanendrikendrehana tsotra izao. Nandritra ny fotoana nijanonan’ireo milaza ho mahay mikaroka zavatra very, dia efa feno olona teo anoloan’ilay tanàna.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68236) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (647) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (404) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (178) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (94) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (86) 21 février 2020